Abaningi abathanda isanqante-Korean for ukunambitheka kwako okumnandi futhi umbono ekhangayo kakhulu libalele. Ngaphezu kwalokho, ligcwele amavithamini namaminerali. Omuny uyabonga ngalo lokho kungenzeka ukusebenzisa noma isiphi isidlo ohlangothini ngisho sebenzisa njengoba isidlo ezimele. Ngamafuphi, lo isanqante Korean ushiya akekho ngabandayo. Kodwa enye ungazisebenzisa kanjani lokhu isidlo isiKorea, ukwengeza ezihlukahlukene kuya ekudleni komkhaya? Sikunikeza i isaladi ezithakazelisayo nge isanqante-Korean.
Korean isanqante isaladi inkukhu
Kakhulu isaladi elula, futhi kalula kwenziwa, kodwa isikhathi esingakanani ukuba bakhumbule labo abaye bazama ke.
• Bilisa inkukhu webele (mayelana 300 g) emanzini kancane usawoti. Sho, uthathe yizicucu amancane. Kulesi iresiphi yiyona kwalokho izaqathe, kanye okugcizelela isidingo ukwenza inkukhu. Ngakho-ke webele izingcezu akufanele ukuba mancane kakhulu ukuba linqobe isaladi.
• Omunye esinamanzi bell pepper kanye imbewu msulwa Isiqu. Uthathe cubes. umbala pepper ekhethiwe ukuze isaladi nge isanqante Korean zazisekhona licace futhi ezimibalabala ngaphezulu.
• Xuba pepper, inkukhu kanye izaqathe-Korean (cishe 150-200 g). Prisolit, inkathi imayonnaise Ukuthutha omuhle.
• Nasi parsley noma dill ukuhlobisa isaladi.
isaladi Korean ne izaqathe kanye amakhowe
izaqathe Korean kuhlanganiswe kahle amakhowe zifakwe emanzini anosawoti. Anazi ngisho Udinga ukusebenzisa imayonnaise for refueling ngoba lokhu isaladi etholwe ngaphandle kuba namanzi kakhulu. Ukuze wenze lokhu, thatha isanqante ngomumo (800 g) kanye amakhowe zicwiliswe (mhlawumbe amakhowe, 200). ama ezimbili bese uthathe izindandatho gazinga kuze umbala yegolide phezu amafutha zemifino. Zonke sihlanganise endishini (anyanisi ngamafutha lapho kuba okugazingiwe). Uma okuphekiwe izaqathe kuphela, shiya isaladi esiqandisini ngobusuku obubodwa ukuba pickling sokugcina. Uma isanqante Korean usulungile, ungakwazi ukukhonza lokhu isaladi ngokushesha etafuleni.
Uma uthanda amakhowe ethosiwe, zama lokhu iresiphi. 400 g izaqathi Korean Thatha 300 g amakhowe ethosiwe in ibhotela. Zonke ukuxhuma ndawonye inkathi nge imayonnaise. Ngalokhu samuntu awunankinga futhi inkukhu inyama (cishe 1 webele).
isaladi Egqinsiwe nge isanqante-Korean
Ingabe wena uthanda "Mimosa"? Uma kunjalo, zama ngayo inguqulo yasekuqaleni isanqante okubabayo ku-Korean. Bahlanganise ngemfoloko can lenhlanzi futhi beka izinhlanzi i dish okusaqanda. Omunye onion, uthathe izindandatho nomzimba omncane, amboze ngamanzi abilayo bese wengeza ushukela kancane - kubalulekile ukuthi anyanisi azimnandi. Ebilisiwe amazambane jackets zabo 3 epholile futhi grate. Eceleni on a grater emihle grate 5 amaprotheni 5 amaqanda izikhupha. Same ukuqhubeka ushizi (angaba ngu-150 g). Fake usike kweqembu dill.
Manje izinhlanzi izingxenye isaladi Lay izingqimba ngokulandelana ngaphandle ukukhohlwa recoat yabo imayonnaise: anyanisi, amazambane, izaqathe-Korean (mayelana 150 g), yashizi amaqanda qanda, ibhange okusemathinini corn ushizi. Uhlobise nge sprig of mimosa isaladi. amahlumela ngesikele sokuthena yonke dill ngelulela ebusweni izitsha ngesimo amahlamvu afafaze chips amaqanda izikhupha ngesimo inflorescences. Lokhu isaladi kuyogxilisa wonke umuntu nge ulimi lwawo luhluke nobuhle.
Salad nge isanqante Korean ishiya okuningi indawo lokusungula ekhaya abapheki. Ucabanga mhlawumbe une ukudla kwakho okuthandayo, obekungadala ngokuvumelana nalo. Noma ngabe uthanda walnuts, izimfanzi, pasta, amawolintshi, squid noma enye into? Nge isibindi, ulimi, ham noma ezinye inyama isaladi nge isanqante Korean kuyoba nje emangalisayo. Ungase uthande ukusebenzisa zonke lezi imikhiqizo ngesikhathi esisodwa. Wena ngokwakho ungakha iresiphi for brand ayo ulethisi, okuzokwenza iqhaza izaqathe isiKorea, futhi sibaphathe abangane babo ngokwethukela.
Vitamin isaladi izaqathe nge garlic noshizi idili zemikhosi futhi imenyu nsuku zonke
Ukuhlehlela isaladi iresiphi "Irina" nge ngibhema inkukhu amabele
Uphawu oluthi "Cha yokupaka": isenzo zalesi sibonakaliso, yokupaka ngaphansi uphawu kanye nesijeziso ke
Ola Håkansson: Biography umculi
Okuhle Izimoto ukubuyekezwa. Kuhle imoto
Ukuthenga e Istanbul
"Chrysler Grand Voyager" Isizukulwane 5 - Yini okusha?
Indlela ukuqeda corns izinyawo.
Imibono Yamabhizinisi: Qasha amabhasi emadolobheni amakhulu